ပရိုဆက်ဆာ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
Intel က Server ကို Processor များ-Intel®Xeon®ပရို 7000 အစဉ်အတိုင်းလိုက်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ 22, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor X7560 (24M ကကက်ရှ်, 2.26 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q1’10 8 130 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
စက်တင်ဘာလ 9, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics‡ Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2 (3M ကကက်ရှ်, 2.30 GHz အမြန်နှုန်း) Launched Q2’12217 W Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2 (8M ကကက်ရှ်, 3.10... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
သြဂုတ်လ 29, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Processor Graphics ‡ Intel® Xeon® Processor E5-4603 (10M ကကက်ရှ်, 2.00 GHz အမြန်နှုန်း, 6.40 GT/s Intel® QPI) End of Life Q2’12495 W Intel® Xeon® Processor... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Technology_Internet Nokia က HD Graphics နည်းပညာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ဥပဒေရေးရာအနက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် HTC က Intel က processor ​​ကို ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပရိုဆက်ဆာ Samsung က OS ကို-STORE စီပီယူ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Software များ 64-နည်းနည်းက Windows မိုဘိုင်းဖုန်း